Skola och barnomsorg Iskoolada iyo xannaanada carruurta - Ängelholms kommun
Du är här: Startsida / Other languages / Ku soo dhawoow degmada Ängelholm / Skola och barnomsorg Iskoolada iyo xannaanada carruurta
Iskoolada iyo xannaanada carruurta
Dhammaan dadku waa in ay dareemaan in lagu soo dhoweynayo goobaha waxbarashada iyo xannaanada carruurta oo ay degmadu qabanqaabiso iyadoo aan loo eegin asalkooda iyo xaaladahooda. Waxaan khibrad u leenahay inaan qaabbilno carruur iyo arday ka kala yimid dalal kala duwan. Hababka iskooladaas looga qaabbilana waa kuwo aad u horumarsan oo mar walba lagu bilaabo kulan iskoolku kula kulmayo cunugga/ardayga iyo waalidkiis si loo qoro.
Carruurta Iswiidhen waxay iskoolka bilaabaan marka ay buuxiyaan 6 sano. Intaas ka hor waxay dhigtaan dugsiyada barbaarinta. Dhammaan xaafadaha degmada Ängelholm waxaa ku dugsiyo barbaarin carruur. Maamulka degmada waxaa sharci ahaan waajib ku ah in uu muddo afar bilood gudahood ah carruurta ugu diyaariyo sidii ay ku bilaabi lahaayeen dugsi barbaarin, kadib marka waalidku soo gudbiyo codsiga xannaanada
Carruurtu waxay iskoolka ku bilaabaan lix sano jir. 6 sano ilaa 15 sano waxay dhigtaan iskoolka loo yaqaan dugsiga hoose/dhexe.
Dugsiga hoose/dhexe waxaa ka jira fasallo lagu diyaariyo ardayda dhowaan yimid Iswiidhen. Halkaas wuxuu iskoolku ka shaqeeyaa sidii ardaydaas loogu diyaarin lahaa waxbarashada iskoolada Iswiidhen, oo ardaydaas loo siin lahaa aqoon ku filan oo ay u leeyihiin afka iswiidhishka, isla markaas loo baari lahaa waxbarashooyinkoodii hore iyo maaddooyinka ay aqoonta u leeyihiin.
Carruurta jirta 15 sano ilaa 18 sano waxay dhigtaan waxbarasho lagu magacaabo dugsiga sare. Dugsiga sare ee Ängelholm waxaa lagu magacaabaa Rönneskolan,
waxaana halkaas barogaraamyo diyaarin ah oo ay ka mid tahay barashada afka. Waxaa loogu talaglay carruurta iyo dhallinyarada dhowaan Iswiidhen yimid kuna hadasha luuqad kale oo aan ahayn iswiidhish.
Mar haddaad tahay qof weyn oo dhowaan dalka yimid waxaad akhrisan kartaa afka iswiidhishka oo loogu talagalay dadka ajnebiga ah (SFI). Waxaad foomka aad ku
codsaneyso ka buuxin kartaa rugta Vägledningen oo ku taal maktabadda degmada Ängelholm (Stadsbibliotek). Waxaa lagaaga baahnaan karaa inaad horay u sii qaadato warqadda go’aanka sharciga degganaanshaha iyo warqad dhalasho oo waxbarashada loo goosto. Warqadda dhalashada waxaad ka heleysaa Hay’adda canshuuraha.